अब योगदानमा आधारित ‘पेन्सन’, यी कर्मचारीहरुको लागि लागू हुनेछ | जनदिशा
अब योगदानमा आधारित ‘पेन्सन’, यी कर्मचारीहरुको लागि लागू हुनेछ
काठमाडौँ । कर्मचारीको पेन्सनमा नै राज्यकोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुन थालेपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटबाट पनि निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
Previous Previous post: बसाइँ सरी आउनेलाई १ लाख इनाम, गाउँमै व्यवसाय गरे ५ लाख अनुदान !
Next Next post: बन्ने भयो फिल्म ‘बकम्फुसे राजा’, भारतमा छायाङ्कन गरिने !